Afaka milalao Halo ianao izao amin'ny iPhone sy iPad | Vaovao IPhone
Ny mpampiasa IOS dia tsara vintana satria vao nanampy lalao lehibe roa amin'ny katalaogin-dahatsary ao amin'ny App Store izy ireo, ary samy an'ny iray amin'ireo sagasy malaza be mpanaraka indrindra: Halo Microsoft, izay mandraka ankehitriny dia nitahiry ireo lohateny ireo ho an'ny sehatra (PC, Xbox, Windows Phone) dia nanao dingana somary nahagaga tamin'ny fitondrana ireo lalao video ireo tany amin'ny iOS. Halo: Fanafihana Spartan sy Halo: Spartan Strike dia azo sintonina izao ary mankafiza amin'ny iPhones sy iPad anay.
Ny famaritana ara-teknika mety indrindra an'ireo lalao video roa ireo dia ny "mpitifitra voalohany miaraka amin'ny fahitana ambony ambany." Ho an'ireo izay tsy mahalala loatra ireo teny ireo dia afaka milaza izahay fa mifehy ny toetra avy any ambony ianao, mamindra azy amin'ny tanana iray ary mifehy ny làlan'ny tifitra miaraka amin'ny iray hafa. Araka ny hitanao amin'ny horonantsary eo am-piandohan'ny lahatsoratra, ny sary sy ny vokatra manokana dia manana kalitao lehibe, ary raha tsy misy ny fanamarinana ny fahafahan'izy ireo milalao, ny lalao dia mihoatra ny mampanantena.
Miaraka amin'ity dingana nalain'i Microsoft ity izay nitondra lalao roa amin'ny iray amin'ireo lohateny marika fampiasa indrindra ao amin'ny iOS, dia mety hisy làlana vaovao iray hanombohana ny marika hanitatra amin'ireo sehatra hafa. Tsy fantatray raha tafiditra ao anaty drafitra ny fitondrana ireo lohateny ireo amin'ny Android, saingy io dia iray amin'ireo dingana lojika indrindra raha te-hanitatra hatrany ianao. Aleo tadidintsika fa ny orinasa tao anatin'ny fotoana fohy dia efa nahavita fampiharana vitsivitsy vitsivitsy ao anatin'ny App Store (Teny, Excel, Power Point, Outlook, OneCloud, Xbox Music, sns)
Halo: Spartan Strike ary Halo: Spartan As assault dia azo sintonina avy amin'ny App Store amin'ny € 5,99 tsirairay, na dia mikasa ny hividy titre roa aza ianao dia afaka mividy ny fonosana feno miaraka amin'ny € 9,99, vidiny somary ambany noho ny vidiny misaraka. Fampiharana iraisana manerantany ho an'ny iPhone sy iPad izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Afaka milalao Halo amin'ny iPhone sy iPad anao izao ianao
Dayara dia hoy izy:
Na amin'ny olona voalohany na amin'ny zenith, fa tsy izy roa.
Valiny tamin'i Dayara
fonker dia hoy izy:
Raha ny marina dia tsy misy izany, na amin'ny olona voalohany na amin'ny zenith.
Mamaly an'i fonker
Ampidiro ny MovieBox amin'ny iPhone amin'ny iOS 8.3 ary tsy misy jailbreak
Apple vs Samsung: misafidy ny ankizy ary ity no vokany ...